Vaovao - Nifarana tamim-pahombiazana ny Sichuan Ju Neng Autumn Canton Canton 2018
Vita soa aman-tsara ny Sichuan Ju Neng Autumn Canton Fair 2018
Tamin'ny 6 hariva tamin'ny 4 Novambra 2018 dia vita soa aman-tsara ny Autumn Canton Fair, izay natrehan'i Sichuan Ju Neng!
Naharitra 5 andro ny fampirantiana ary nahazo 127 ny mpanjifa avy any ivelany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny mpanjifa dia naneho ny fahalianany amin'ny vokatra tsy voatenona meltblown ary naneho ny filany mividy. Ity efitrano ity dia hita ao amin'ny efitrano fitsaboana. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia ara-pahasalamana. Ireo matihanina any an-tsaha dia manana tombony lehibe eo amin'ny tsenan'ny tenona tsy fahasalamana.
Voalohany, fizarana ny mpanjifa
Ireo mpanjifa tonga tao amin'ny trano heva dia tao Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana, Amerika atsimo ary Aostralia no misy indrindra. Anisan'izany, Indonezia, Singapour, India ary ny mpanjifa hafa no nanoratra ny ankamaroany, ny mpanjifa manerantany dia tena sariaka, ary 80% ny mpanjifa no nampiasa serivisy China WeChat ho an'ny fifandraisana isan'andro. Araho ny fanaraha-maso hanomezana fahafaha-miaina.
Faharoa, ny fangatahana vokatra tsy tenona
Ao amin'ny saron-tava voadio ny saron-tava, pad mpitroka ranoka ara-pahasalamana, saron-tava, landihazo manintona solika, lamba mamafa ary vokatra tsy tenona, ny sarontava, indrindra ireo sarontava vita pirinty, no manana ny mpanjifa betsaka indrindra, arahan'ny fitsidihan-drà mitsabo pads. Manadio mamafa, ny ankamaroan'ny mpanjifa dia nahazo santionany hanehoana ny fikasana fiaraha-miasa maharitra.
Fahatelo, ny fampielezan-kevitra momba ny tombony amin'ny dokambarotra
Miaraka amin'ny tombotsoan'i Sichuan Ju Neng amin'ny maha-mpanamboatra azy, fitaovana ampitaina ho fototry ny kalitao milamina, ny lamba voatroka dia nopetahana ny masterbatch elektronika any California, izay mitazona ny zava-bitan'ny fitaovana mandritra ny 3-5 taona, tsara lavitra noho ny ankamaroan'ny mpamokatra ao an-trano afa-tsy ny mamonjy ihany. . Miaraka amin'ny fe-potoana fohy 5 volana, ny teknolojia fanontana tokana dia noraisina tsara ihany koa. Amin'ireo tombony ireo dia hampitombo ny fahatokisan'ny mpanjifanay sy ny fiaraha-miasa aminay.
Nahazo mpanjifa tranainy tamin'ny fampirantiana i Sichuan Jueneng Filter Materials Co., Ltd. Ny mpanjifa dia naneho ny fahafaham-pony tamin'ny fiaraha-miasa teo aloha ary nametraka hevitra matihanina sasany mba hampandeha kokoa ny fiaraha-miasa. Malaza be ilay fampirantiana ary io ihany no tranombakoka fampitaovana fitsaboana. Ilay mpanamboatra lamba tsy tenona tsy voatenona, nahitana vokatra tsara ity fampirantiana ity, mifankahita amin'ny manaraka ao amin'ny Canton Fair!
Raha mila fanazavana momba ny vokatra meltblown, contact Ms. Li: +86 18116628077
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava Ffp3, Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda,